अचम्म ! दहि खानुका यस्ता अपत्यारिला फाइदा, जानिराख्नुस् - ज्ञानविज्ञान
स्वादिलो गुणकारी पेय दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ ।
दहीको आर्युवेदिक महत्व छ । यो स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केहि यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ ।
दही खाँदाका फाइदाहरू
हरेकदिन एक कचौरा दहीखाने बानी गर्नाले राति मिठो निन्द्रा लगाउन मद्दत गर्छ
पसिनाको गन्धबाट मुक्ति
दही र बेसनलाई मिक्स गरेर त्यो मिश्रणले मालिस गर्नुहोस् केही समयपछि नुहाउनुहोस् यसले पसिनाको गन्धबाट मुक्ति दिलाउँछ ।
हड्डीलाई मजबुत बनाउँछ
दहीमा प्रसस्त मात्रामा पाइने क्याल्सियमले हड्डीलाई मजबुत र स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । दहीमा क्याल्सियम, फस्फोरस, आइरनको मात्रा उच्च हुने भएकाले दही खाँदा हड्डी बलियो हुन्छ ।
दिनहुँ दही खाने गरेमा मुटुसम्बन्धी समस्या कम हुँदै जान्छ । दहीले शरीरमा कोलेस्ट्रोल र रक्तचापलाई नियन्त्रित राख्छ । यसले तपाईंको मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
जोर्नीको दुखाईबाट मुक्ति
दहीमा हिंग मिसाएर खानाले जोर्नीको दुखाईबाट मुक्ति मिल्छ ।
पाचन प्रक्रियामा सुधार
दहीमा पाईने चिनिको मात्राले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
दहीमा किसमिस बदाम वा काजु मिलाएर खानाले तौल बढाउन मद्दत गर्छ ।
छालामा दही र कागतिको रस मिलाएर लगाउनुस् र केही समयपछि सफा पानीले छाला पखाल्नुस् । यसले छाला चम्किलो सुन्दर र स्वस्थ राख्छ ।
दहीले कपाल पाँच मिनेट जति मालिस गर्नुस् र केही बेर पछि नुहाउनुस् यसले कपाल चम्किलो, बलियो र सुन्दर राख्छ ।
दहीमा मरिच पाउडर मिसाएर त्यसले टाउकोमा मालिस गर्नुस् हप्ताको दुईपट यसो गर्नले तपाईको चाँयाको समस्या कम हुन्छ ।
ओठ फुट्न कम
दहीको मलाइ(नौनी) दिनको दुई तीन पटक ओठमा लगाउनाले ओठ फुट्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्छ ।
शरीरलाई ठंडा/चिसो राख्छ
दहीमा पानी मिसाई लस्सी बनाई वा मही बनाई पिउनाले शरीरमा पानीको मात्रा प्रशस्त हुनुका साथै पेटको गर्मी पनि हराएर जान्छ ।
दहीमा भुटेको जिरा पिसेर हाली त्यसमा अलिकति नुन र मरिच हालेर बिहान खाएमा खाना राम्रोसँग पच्छ ।
टाउको दुखाइ हटाउँछ
बिहान सूर्योदयसँगै टाउको दुखाइ बढ्दै जाने समस्या छ भने सूर्योदयअघि दहीसँग भात मुछेर खाने गरेमा टाउको दुखाइ कम हुन्छ ।
पेटमा बोसोको मात्रा निरन्तर बढ्दै गएको छ भने बिहान खाली पेटमा पाँच चम्चा दही खाने गरेमा पेटमा जम्मा भएको बोसो कम हुँदै जान्छ ।
पोषण प्रदान गर्छ
दहीमा भिटामिन–ए, भिटामिन–डी, भिटामिन–बी १२, आइरन, प्रोटिनजस्ता पोषक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
एसिडिटी छ भने बिहान एक कचौरा दही खाएमा एसिडिटी हटेर जान्छ । दही खाने गरेमा पेटसम्बन्धी अन्य समस्याको पनि समाधान हुन्छ । बाथको असर कम गर्छ बाथसम्बन्धी समस्या भएकाहरूले दही खाँदा राहत मिल्छ ।
रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ
दहीमा लाभकारी ब्याक्टेरिया पाइन्छ, जसले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ । योनिको खटिरा हटाउँछ योनिमा खटिरा आउने (भेजिनल यिस्ट इन्फेक्सन) छ भने दिनहुँ दही खाने गर्नाले खटिरा हराउँदै जान्छ ।
दिनहुँ दही खानाले दिमाग स्थिर रहन्छ । जसले चिन्तामुक्त हुन मद्दत गर्छ ।
दहीमा भिटामिन–ई, जिंक र फस्फोरस प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जसले छालालाई चम्किलो र सुन्दर बनाउँछ । साथै, गहुँको पिठोमा दही र कागती मिसाई फेसप्याक बनाएर अनुहारमा लगाएर २० मिनेटपछि धुने । यसो गर्दा अनुहार सफा र चम्किलो बन्छ ।
दूधको अभाव पूर्ति गर्छ
अपच हुने समस्या, एलर्जीलगायत कारणले दूध खान सक्नुहुन्न भने दही खानुस् । दूधबाट शरीरले पाउने यावत लाभ दहीले पनि दिन्छ ।
यौन दुर्बलता भएमा खानाअघि दही खाने गर्नाले यौन क्षमता वृद्धि हुने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ । व्यायामपछि लाभदायक दहीमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटलगायत सन्तुलित मात्रामा पाइने भएकाले व्यायामपछि दही खानु राम्रो हुन्छ । व्यायामका क्रममा पसिनामार्फत निकास भएका शरीरका खनिजको अभाव दही खानाले पूर्ति हुन्छ ।
रुघाखोकी कम गर्छ
रुघाखोकी लाग्ने गरिरहन्छ भने दिनहुँ दही खाने गर्नुपर्छ । दहीमा पाइने लाभकारी ब्याक्टेरियाले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछ, जसले गर्दा रुघाखोकी लागिरहने क्रम कम हुन्छ ।
दाँत स्वस्थ राख्छ
दहीमा अमिलोपन भए पनि यसमा दाँतका इनामेल हटाउने खालको अम्लीय तत्व हुँदैन । दहीमा ल्याक्टिक एसिड पाइन्छ, जसले दाँतको इनामेल हटाउनुको सट्टा दाँत र गिजालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
दहीले कपाल मालिस गरी केही समय त्यसै छोडेर धुने । यसो गर्दा कपाल झर्ने क्रम कम हुन्छ । कपाल उम्रिन्छ दहीलाई तामामा निरन्तर रगडेर हरियो बनाई कपाल खुइलिएर तालु भएको ठाउँमा मालिस गर्नाले कपाल उम्रँदै जान्छ ।
राति आँखा नदेख्ने समस्या छ भने दहीको पानीमा मरिचको धुलो मिसाई गाजलजसरी आँखावरिपरि लगाउनाले समस्या कम हुँदै जान्छ । जिब्रोको समस्या दहीको पानीले बिहान कुल्ला गर्नाले अथवा दहीमा पाकेको केरा मिसाई खानाले जिब्रो पोल्ने अथवा जिब्रो सुनिने समस्या कम हुन्छ स्रोत-स्वास्थ्य खबर
यहाँ तपाईहरूलाई हामीले थप सम्बन्धित जानकारी पस्केका छाैँ ।
यस्ता रोग लाग्न सक्छ क्याल्सियमको कमी भएमा
यदि हामीले शरीरलाई चाहिने आवश्यक क्याल्सियम उपभोग गरिएन भने शरीरले हड्डीबाट क्याल्सियम लिई रक्तसन्चारप्रणालीमा पठाउँछ । यसले हड्डी कमजोर भई ओष्टियोपोरोसिस रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
हाम्रो शरीरमा पाइनेमध्ये अधिकांश क्याल्सियम हड्डीमा पाइन्छ । यसले हड्डी मजबूत पार्छ । क्याल्सियमकै कारण मुटु, मांसपेशी, रगत तथा स्नायुकोषहरुले पनि शरीरमा स्वस्थ रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
क्याल्सियमको कमीका कारण लाग्ने रोगहरू
कति चाहिन्छ मानिसलाई क्याल्सियम दैनिक ?
१ हजार मिलिग्राम दैनिक
५० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला तथा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका पुरुष – १३ सय मिलिग्राम दैनिक
एकवर्षदेखि माथि र नौ वर्षभन्दा मुनीका बच्चा
५ सय देखि ८ सय मिलिग्राम दैनिक
क्याल्सियम पाइने मुख्य पदार्थ दूध हो । विशेषगरी गाइको दूधमा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । चिल्लोरहित दुधले मानिसलाई आवश्यक पर्ने ३० प्रतिशत क्याल्सियम दुधले पूर्ति गर्छ ।
दहि दुधभन्दा पनि सजिलै पच्छ । २२५ग्राम दुधमा भन्दा त्यतिनै मात्राको दहीमा बढी क्याल्सियम पाइन्छ । सादा दहीमा प्रोटिन पनि हुन्छ ।
तरकारी तथा हरिया सागसब्जी
फलफूल तथा बदाम
सोय तथा सोयजन्य उत्पादन
खानाबाटै नियन्त्रण गर्ने उपाय कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइड
व्यक्तिमा कोलेस्ट्रोलको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र धेरै बिरामीमा औषधिको मात्रा घटाउनुको साथै बन्द समेत गर्न मिल्छ । उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइडको प्रमुख कारण अस्वस्थ आहार भएकोले खानपीनमा सुधार गरे विना औषधि अधिकांस औषधि खानै पर्ने अवस्थाहरु (मुटुरोग, मस्तिष्कघात, बल्केजको रोग, मधुमेह, वंशाणुगत, धुम्रपान, मुटुरोगको खतरा बढी भएको, स्टेन्ट राखेको आदि) बाहेकका व्यक्तिले औषधिको प्रयोग नगरी अरु उपायले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
खाना बाट पनि ३ देखि ६ महिना भित्रमा नियन्त्रण नभएमा औषधिको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ । सुरु मै अत्याधिक उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइड देखिएमा थोरै समयको लागि चिकित्सकको परामर्श अनुसार औषधि सेवन गरी, जीवनशैलीमा परिवर्तन गरेर यसलाई नियन्त्रणमा राख्नु राम्रो हुन्छ ।
खानाबाट उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला सैचुरेटेड फ्याट र टान्स फ्याटको प्रयोगलाई न्यून गर्नुपर्छ । बनस्पतिबाट नै प्राप्त हुने रेसादार खाना बढी खानुपर्छ ।
रिफाइन्ड कार्बोहाइट्रेड (जुन जंकफुडमा पाइन्छ) लाई कम र प्राकृतिक कम्प्लेक्स कार्वाेहाइट्रेड (जुन वनस्पतीबाट प्राप्त हुन्छ) बढी प्रयोग गर्नुपर्छ । जनावरबाट प्राप्त हुने खाना (मासु, दुध) कम खाने र वनस्पतीबाट प्राप्त हुने खाना धेरै खाने गरेमा कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ ।
भात, गँहु, मकै
भातमा कार्बोहाइट्रेड बढी हुने भएको ले यसको जती कम प्रयोग गरिन्छ, उत्ति नै स्वस्थकर हुन्छ । भात बढी खानेहरुमा ट्राइग्लीसेराइड बढी हुने र राम्रो कोलेस्ट्रोल कम हुने गरेको पाइन्छ । गँहु र मकै भन्दा भातमा फाइवर र अन्य पोषण तत्वहरु पनि कम हुन्छ । त्यसैले कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणका लागि भात भन्दा गँहु र मकैको प्रयोगमा बढी जोड दिनुपर्छ ।
भातको धेरै प्रयोगले मधुमेह लगायत भविष्यमा मुटु रोगको पनि खतरा बढाउँछ । ट्राइग्लीसेराइडलाई नियन्त्रण गर्न भात थोरै खानु लाभदायक हुन्छ । दिनमा एक पटक भात र एक पटक रोटी, मकै खानु राम्रो उपाय हुनसक्छ ।
कोलेस्ट्रोलको नियन्त्रणको लागि दाल तथा गेडागुडी उत्तम खाना मानिन्छ । यसमा फाइवर धेरै हुन्छ, चिल्लो हुँदैन, कार्बोहाइट्रेड पनि कम हुन्छ, त्यसैले निरोगी र रोगी दुबैको लागि यो सर्वोत्तम आहार हो ।
सागसब्जी, तरकारी र सलाद
सागसब्जी, तरकारी र सलादमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन। फाइवर प्रशस्त मात्रामा हुने भएकोले, कोलेस्ट्रोल घटाउन पनि सहयोग गर्छ । यसमा क्यालोरी पनि कम हुने भएकोले मोटोपना हुन नदिन मद्दत पुर्याउछ ।
यसले रगतमा राम्रो कोलेस्ट्रोल (एच.डी.एल.)को स्तर पनि बढाउँछ । कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणको लागि खानाको प्रत्येक छाकमा प्रशस्त सागसब्जी हुनु जरुरी हुन्छ, तर यसलाई धेरै तेलमा लामो समयसम्म नपकाएर सकेसम्म प्राकृतिक रुपमा (बोक्रा नझिकेको) खानु राम्रो हुन्छ ।
फलफूलमा चिल्लोको मात्रा अत्यन्तै न्यून हुने भएकाले कोलेस्ट्रोल बढाउँदैन सँगै राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ । फाइबर प्रशस्त हुने भएकाले अरु खानामा पाइने कोलेस्ट्रोलको आन्द्रामा शोषण पनि घटाउँछ ।
कोलेस्ट्रोलका बिरामीले ड्राइफ्रुट खानु हुँदैन, यसले कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढाउछ भन्ने भ्रम धेरैमा भएको पाइन्छ । यसमा फ्याटको मात्रा हुन्छ, तर सेचुरेटडट फ्याट भन्दा अन सेचुरेटेड फ्याट बढी हुन्छ, जसले रगतमा राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तर बढाउँछ ।
ड्राइफुटहरु मध्ये पनि आल्मोण्ड(बदाम), ओखर, पिस्ता राम्रो मानिन्छ । सामान्य व्यक्तिले पनि दिनमा एक मुठी ड्राइफुट खानु कोलेस्ट्रोलको दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । अरु ड्राइफ्रुटभन्दा काजुमा अली बढी फ्याट हुन्छ, तर यसको प्रयोग पनि स्वस्थकर नै हुन्छ ।
दूध, दहि, घ्यू
दुधको प्रयोगले ट्राइग्लीसेराइड सँगसँगै कोलेस्ट्रोल पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ । दुधबाट बन्ने अन्य परिकारको प्रयोगले पनि कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइड बढ्न सक्छ । त्यसैले उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रणको लागि खानामा दुध र दुधजन्य खानाको प्रयोगलाई न्यून गर्न जरुरी हुन्छ ।
कम चिल्लो दुध थोरै मात्रामा खान सकिन्छ । दुधभन्दा दही र महिमा फ्याट कम हुने भएकोले, चिल्लो कम दही र महिको प्रयोग गर्न मिल्छ । तर कोलेस्ट्रोलको औषधि सेवन गर्नु भन्दा दुध नखानु नै राम्रो उपाय हो । राती सुत्ने बेलामा दुध खाने बानी हटाउँन जरुरी हुन्छ । घ्युमा सैचुरेटेड फ्याट बढी भएकाले खानु नै हुँदैन । बनस्पती घ्युमा टान्स फ्याट बढी भएकोले खाने सोच्नु पनि हुदैन ।
अण्डाको पहेलो भागले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ । त्यसैले उच्च कोलेस्ट्रोल भएकाले पहेलो भाग खानु हुदैन, तर सेतो भाग जती खादा पनि हुन्छ । सामान्य व्यक्तिले पनि हप्तामा २ बटा भन्दा बढी पहेलो भाग खानु हुँदैन भने मधुमेह, मुटुरोगी, आदिले एउटा पनि नखानु राम्रो हुन्छ ।
कोलेस्ट्रोलको दृष्ट्रिकोणले माछा राम्रो खाना मानिन्छ । तर थोरै तेलमा अली अली तालेर मात्र खानु राम्रो मानिन्छ । हप्तामा २ पटक माछा खानुले राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तर बढ्छ । तर, यो पनि पकाउने तरीका र माछाको शुद्धतामा भरपर्छ ।
रेडिमेड र फास्टफूडहरु (जुन पसलबाट किनेर ल्याइन्छ), भुटेको वा तारेको खाना, आइसक्रिम, केक, पेस्ट्रिज, मिठाई आदि खानामा सैचुरेटेड फ्याट र ट्रान्स फ्याट बढी पाइन्छ छ र यसमा क्यालोरी पनि अत्याधिक हुन्छ । उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रणको लागि यस्तो खाना हानिकारक भएकोेले कोलेस्ट्रोल सामान्य भएका व्यक्तिले पनि सकेसम्म यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
यसमा दुध, चिनी र तेलको प्रेयोग गरिएको हुन्छ । यसको प्रयोगले कोलेस्ट्रोल÷ट्राइग्लीसेराइडलको स्तरमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसैले यसलाई न्यून मात्रामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । मिठाईमा क्यालोरी बढी हुनाले मेटोपनको संभावना पनि बढी हुन्छ । उच्च कोलेस्ट्रोल र ट्राइग्लीसेराइडको नियन्त्रणको लागि मिठाई नखानु राम्रो हो ।
रेस्टुरेन्ट तथा पार्टीमा तेल र घ्यूको प्रयोग बढी गरिनुको साथै यसको गुणस्तर पनि भरपर्दो नहुन सक्छ । यस्तो खाना स्वास्थ्यको लागि राम्रो मानिदैन । कोलेस्ट्रोल उच्च भएका व्यक्तिले यस्तो खाना कम गर्नुपर्छ । कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्नको लागि घर बाहिरको खाना अत्यन्तै कम खानु पर्छ ।
जुन खाना वा पेय पदार्थमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ त्यस्तो खाना खानु हँुदैन । । कोण्डड्रिंक्स÷जुस आदिको प्रयोगले पनि ट्राइग्लीसेराइड बढाउने संभावना हुन्छ । सकेसम्म चिनी मिसाइएको जुनसुकै खाना भएपनि नखानु वा थोरै खानु राम्रो हो ।
यसमा पनि चिनी तथा दुधको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जुन कोलेस्ट्रोल उच्च भएका व्यक्तिका लागि उत्तम मानिदैन र यसमा क्यालोरी पनि बढी हुन्छ । त्यसैले दुध भएको चिया दिनमा एक पटक भन्दा बढी खानु हुँदैन । सकेसम्म कागती चिया पिउनु राम्रो हुन्छ ।
मुटुलाई थोरै मदिराले राम्रो गर्छ भने तत्थ्य अझ पनि विवाद कै विषय हो । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, मस्तिष्क रोग, मृर्गौला रोग, मोटोपन आदिले पिडितले मात्रै हैन, एउटा स्वस्थ नवयुवकले पनि आफूले खाने खानाको गुण र अवगुणमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न निरन्तर प्रयासरत हुनुपर्छ ।
नियमित एक घण्टा हिड्नु, चुरोटको सेवन नगर्नु, तौललाई नियन्त्रणमा राख्नु र मदिराको प्रयोग नगर्नु वा कम गर्नु पनि खानपीन सँगसँगै उत्तिकै जरुरी मानिन्छ । घरको खाना, शाकाहारी खाना र बनस्पतिबाट प्राप्त हुने खानाको प्रयोग गरेमा कोलेस्ट्रोलको समस्या हुँदैन र औषधिको मात्रा घटाउँने र बन्दै गर्न मिल्ने पनि हुनसक्छ ।
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेला, जानकारीमुलक
Don't Miss it हाम्राे घर आगँनमै पाइने घ्यूकुमारीकाे अचुक औषधी यस्ताे, पुरा पढ्नुहोस्
Up Next पेट सफा गर्ने सजिलो घरेलु उपचार ! शेयर गर्नुहोस, कसैलाई काम लाग्न सक्छ ।
जाडाेमा ल्वाङ चिया पिउनुका फाइदा, जानिराखौं
यी हुन् बच्चाका लागि सन्तुलित आहार
धेरै पानी वा तरल पदार्थ पिएको बेला पिसाब लाग्छ, जो स्वभाविक हो । तर, कहिले कहिं पटक-पटक पिसाब लाग्छ । यसको…